Qaramadda Midoobay: usoo maciina Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Qaramadda Midoobay: usoo maciina Soomaaliya
Qaramadda Midoobay: usoo maciina Soomaaliya
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramadda Midoobay ugu qeybsan arrimaha samafalka Soomaaliya, Philippe Lazzarini, ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha caalamka inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan waddanka ay colaaddu la degtay ee Soomaaliya si buu yiri looga hortaggo in markale ay abaari waxyeelo ba’an gaarsiiso.
Philippe Lazzarini, ayaa tusaale usoo qaatay nafaqo daridda iyo macluusha ku sii baahaya guud ahaan waddanka ay u egtahay mid la mid noqon doonta abaartii 2011-kii haddii lagu guuldareysto in wax laga qabto.
“Saddex sanno ka dib abaartii Soomaaliya, waxaanu lee nahay maya markale yeysan dhicin in la yareysto xasaradda ka dhalan karta anaggoo daawaneyna. Haddiise aanu dooneyno inaanu ka hortagno waxaan u baahan nahay inaanu iminka hawlgelno,” ayuu yiri Philippe Lazzarini oo u waramayay Reuters.
Dhanka kale Lazzarini ayaa ka codsaday ciidamadda dawladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM in hawlgelkooda qorsheysan ay ku xaqiijiyaan furida waddooyin gargaar loo mariyo dadka ay abaartu haysato iyo guud ahaan xal u helida arrimaha cakiran ee samafalka Soomaaliya.
Hadalka sarkaalkaasi ayaa soo baxaya xilli ay Qaramadda Midoobay sii kordhineyso digniinaha abaarta ka dib markii si weyn loogu dhaliilay ka hortag la’aan ka dhalatay abaartii ku dul degtay Soomaaliya sanadkii 2011-kii.
Previous articleSoomaaliya oo laga saaciddayo tayeynta booliska
Next articleXaabsade oo u xargo goostay xaruntiisii!